Ukususela kwiiprofayili zokuya ku-live-ins, nantsi ibali leendatshana zonke iincwadi ezimele ziyazi
Njengokuba kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo zeendaba ezibukhali kwilizwe leendaba, kukho ezininzi iintlobo ezahlukeneyo zamabakala ongabhala . Nazi ezinye zeentlobo eziphambili ozozenza njengombhali wombhali.
Iprofayili yinqaku malunga nomntu, kwaye inkcazo yeprofayili yenye yezinto ezisetyenziswayo zokubhala. Ngokuqinisekileyo ufunde iinkcukacha kumaphephandaba , kumaphephancwadi okanye kwiwebhsayithi.
Abathathi bamanyathelo benza malunga nezopolitiko, ii-CEO, abadumileyo, abadlali , njalonjalo. Iiprofayili zinokuthi zenziwe malunga nabani na abanomdla kunye neendaba eziphathekayo, nokuba zikwinqanaba lendawo, yesizwe okanye lamazwe ngamazwe.
Ingcamango yenkcazo kukuba kunikwe abafundi emva kwemibono bakhangele oko umntu akwenene nangoko, ama-warts kunye nawo onke, kude ne-public persona. Amanqaku eProfayili ngokubanzi anika imvelaphi kwisifundo seprofayili - ubudala babo, apho bekhulile kwaye bafundiswa khona, bahlala phi ngoku, batshatile, banabantwana kunye nokunye.
Ngaphandle kwezinto ezisisiseko, iiprofayili zijonge ukuba ngubani na oko kwathonya umntu, iingcinga zabo, kunye nokukhetha kwabo umsebenzi.
Ukuba wenza iprofayili uya kufuneka ukuba uxoxaniswe nesihloko sakho , kumntu ukuba kunokwenzeka, ukuze ngaphezu kokufumana izicaphuno ungachaza indlela umntu abukeka ngayo kunye nendlela yakhe yokuziphatha. Kufuneka ujonge umntu ekusebenzeni aze enze oko akwenzayo, nokuba ngaba dolophu, ugqirha okanye iphoyisa elibetha.
Kwakhona, khuluma nomceli-ntetho oye uprofethayo, kwaye ukuba umxholo wakho weprofayili uphikisana, bathethe nabanye abagxekayo.
Khumbula, umgomo wakho kukudala umfanekiso owenene wesifundo sakho seprofayili . Akukho ziqwenga ezivuthayo ezivunyelwe.
Iindaba eziphathekayo yinto nje efana neyona nto-inqaku elincinci elijolise kwisihloko somdla kwiindaba.
Iimpawu zeendaba zihlala zihlanganisa izifundo ezifanayo njengeendaba ezidlulileyo zeendaba-ndaba kodwa zenza ngokubanzi nangenkcukacha.
Kwaye njengoko amanqaku amanqaku athi "ngamabali abantu," iimpawu zeendaba zihlala zigxininisa abantu ngaphezu kweendaba ezidlulileyo zeendaba, ezidla ngokugxininisa ngakumbi kumanani nakwiimanani.
Ngokomzekelo, masithi ubhala ngokunyuka kwesifo senhliziyo. Ibali elidlulileyo kwihloko lingabhekisela kwiinkcukacha ezibonisa indlela isifo senhliziyo esinyuka ngayo, kwaye zibandakanya iingcaphuno ezivela kwiingcali ngesihloko.
Ingxelo yeendaba, ngakwelinye icala, iya kuqala ngokuxelela ibali lomntu omnye osulele kwisifo senhliziyo. Ngokuchaza imingeni yomntu, iindaba zeendaba ziyakwazi ukujongana nezikhulu, izihloko eziphathekayo ngelixa zixelela ibali labantu.
Iimpawu ze-Spot zibalisa amabali aveliswa ngomhla wokugqibela ojolise kumcimbi weendaba eziphukayo. Iimpawu zeendaba eziqhelekileyo zisetyenziselwa njengeibhola zecala kwi-barbar , ibali eliphambili leendaba ezimalunga nesiganeko.
Masithi isithwathwa sihlasela idolophu yakho. I-barbar yakho iya kugxila kwii-5 ze-W kunye ne-H yebali-inani lezinto ezilahlekileyo, umda wonakalo, iinzame zokuhlangula ezibandakanyekayo, njalo njalo.
Kodwa nge-barbar ungayinayo nayiphi na inani lamacala okubhekiselele kwiinkalo ezithile zesiganeko.
Elinye ibali lingachaza indawo kwindawo yokukhusela ekhuselekileyo apho abahlali abafudukelwe khona. Omnye unokucinga ngeengqungquthela zangaphambili edolophini yakho. Kanti omnye usenokuhlola imeko yemozulu eyakhokelela kwisiqhwithi esibhubhisayo.
Ngokwenene, ezininzi iibarabara ezihlukeneyo zingenziwa kule meko, kwaye ngokuphindaphindiweyo kunokuba zingabhalwa kwisitayela.
Ngaba kukho i-look entsha epholileyo kwiifashini zokuwa kwezilwanyana? Iwebhusayithi okanye i-tech gadget eyenziwa ngabantu bonke? Indy band ekhangele inkolo elandelayo? Umboniso kwisiteshi sekhebula esingavaliyo eshushu ngokukhawuleza? Ezi ziintlobo zezinto ezenza amabali aqhubeke.
Amabali amathandabuzo athatha umthamo wekcubeko okwangoku, ukujonga izinto ezitsha, ezitsha kunye nezolisayo kwihlabathi lobugcisa, imfashini, ifilimu, umculo, ubuchwepheshe obuphezulu kunye nokunye.
Ukugxininiswa kumabali athile ngokuqhelekileyo ngokuqhelekileyo, okukhawulezayo, okulula ukufunda okubamba umoya woluphi uhlobo olutsha oluxutyushwa ngalo. Ngamanye amagama, ukuba ubhala ibali leendwendwe, nwabisa ngayo.
I-live-in i-inkcazo ejulile, kaninzi i-magazine-length article ebonisa umfanekiso wendawo ethile kunye nabantu abasebenza okanye bahlala khona. I-Live-ins iye yenziwa kwiindawo zokukhusela ezingenamakhaya, amagumbi okuphuthuma, iinkampu zemfazwe, izibhedlele zezifo, izikolo zikarhulumente kunye neendawo zamapolisa, phakathi kwezinye iindawo. Injongo kukunika abafundi ukuba bajonge indawo apho bengeke bahlangane nabo ngokuqhelekileyo.
Abathathi-nxaxheba benza i-ins-life ins kufuneka bachithe ixesha elincinane kwiindawo abazibhalayo (ngoko igama). Yiloo ndlela abafumana ngayo ingqiqo yendawo kunye nomoya. Abathathi bamashishini baye bachitha iintsuku, iiveki kunye neenyanga zenza i-live-ins (ezinye ziye zaphendulwa zibe ziincwadi). I-live-in ingumzekelo oyona mzekelo we-intatheli ozibhaptiza kwibali.
I-Sequoia ebaluleke kakhulu
Amaphepha Uya Kufuna Ukuzalisa i-FAFSA
Izifo zezifo eziqhelekileyo zesiHlathi - Ukukhusela nokuLawula
ISixeko seMatriki - Ukubuyiselwa kweXI
Ngaba uHarry Potter Ukhuthaza iWicca okanye ubuqhetseba?
Iingxelo ezi-10 eziziThambileyo zezilwanyana
Umlando omnyama kunye nexesha labesetyhini 1800-1859
Iingubo Zentsapho Zempahla: Azinjalo Oko Ucingayo
Fundisa kwaye ugcine abantwana bakho abakhulileyo 5-9 kunye nale miboniso yeTV
Isikhokelo soMthengi kwii-Wi-Fi kwiRadio Receivers
Yenza i-Mirror Scrying
Babengubani Abemi BaseMesopotamiya Yasendulo?
Inkolelo okanye Inyani: Ngaba "Okokuqala Ungabi Nengozi" Ingxenye YeHippocratic Oath?